Alexandre Lacazette oo ka dhiidhinaya inuu qandaraas cusub u saxiixo Arsenal & mid ka mid ah kooxaha ugu waaweyn Yurub oo xiiseyneysa saxiixiisa – Gool FM
(London) 23 Sebt 2021. Kooxda Arsenal ayaa dadaal badan u sameyneysa inay heshiis cusub ku qanciso xiddigeeda Alexandre Lacazette, balse wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya inaysan jiho qumman u socon wada xaajoodka labada dhinac iyadoo 30-sano jirka weerarka ka ciyaara uu diiddan yahay inuu qalinka ku duugo qandaraas cusub.
Lacazette oo xagaagii 2017 kusoo biiray Gunners ayaa haatan u muuqda mid soo gabo gabeynaya waayihii Waqooyiga London isagoo sidoo kale xiiso ballaaran ka helaya kooxda Atletico Madrid.
Qandaraaska laacibka Faransiiska ah ayaa dhici doona marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan isagoo 1-da bisha January ee soo aaddan xor u noqon doona inuu wada-xaajood la bilaabo kooxdii uu doono ee ka dhisan meel ka baxdan England.
Dhinaca kale, wargeyksa Le10 Sport ee kasoo baxa Faransiiska isla markaasna baahiyay sheekadan ayaa intaas ku daray inuu Lacazette xiiso ka helayo Atletico iyadoo Macallin Diego Simeone uu si gaar ah u xiiseynayo adeegga laacibkii hore ee Lyon, waxayna kooxda reer Spain haatan ku fikireysaa inay bilaash kula saxiixato xagaaga dambe marka uu xor ka noqdo Emrites Stadium.
Liverpool oo sanado ku dib kusoo laabatay xiisaha iyo doonista xiddiga Real Madrid ee...